Iindaba -Yintoni eqinisekileyo
Isimilo esingenakubanjiswa noJerry Can
Ngakumbi nangakumbi abathengi bethu baqala ukusebenzisa cheertainer ukuzalisa iimveliso zolwelo.
Ke yintoni eqinisekisayo?
Sisikhongozeli esitsha sokupakisha esidibanisa ukuguquguquka kweNgxowa kwiBhokisi kunye nezibonelelo eziphuculweyo zeemveliso zokupakisha ezomeleleyo okanye ezinqamlezileyo, ezenza i-cheeratainer yeyona ndlela ifanelekileyo kuzo zonke ezi zinto zikhethiweyo. Iqulethwe yicube eyenziwe ngetyhubhu, enemigangatho emininzi yeplastiki, ikepusi okanye ivelufa kunye nebhokisi yebhokisi
Ubume bayo benziwe ngetyhubhu bunika uzinzo olukhulu kunye nomthamo omkhulu wokukhupha. Inamacandelo amabini: Umaleko ongaphandle: (polyamide + polyethylene) ikhusela kwioksijini nakumswakama; Ubuninzi bayo kunye nokwakhiwa kuyahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi. Ukudityaniswa kwala macala mabini kunika isikhongozeli kubume obuguqukayo kodwa obuqinisiweyo.
Xa igcwele, kunye nebhokisi yayo yebhokisi, iyaxinana ngokugqibeleleyo, yenza ipallet ezinzileyo, nekhuselekileyo. Xa ingenanto, izinto zayo zinokuhanjiswa kwaye zigcinwe zisongelwe, oko ke kunciphisa kakhulu indawo efunekayo. Oku kuncitshiswa kukhokelela kulondolozo lwezoqoqosho.
Umhloli unokusetyenziselwa zonke iintlobo zeemveliso ezingamanzi kunye nezingamanzi ezisetyenziselwa imveliso kunye nasekhaya. Amacandelo ayo aphambili eyenzelwe wona zezi:
• Imichiza neekhemikhali zeAgrochemicals (izinto zokuthambisa, iipeyinti, izinto zokuncamathelisa, ii-inki, ukulima, imfuyo, ukucocwa kwamanzi, izibaso ezingamanzi, amayeza kunye nezithambiso). • Izithambisi • Izinto zokuthambisa • Ukutya kunye neziselo (eJapan, iviniga, isinongo, ipeyinti, iisosi, iziseko zeziselo, ikofu, ioyile, ijusi kunye neemveliso zobisi).
Abahlaziyi banceda umthengi ukunciphisa iindleko.
l Ukunciphisa ama-60% kwiindleko zokugcina
l Ukuncitshiswa kwe-20% kwiindleko zamandla
l Ukunciphisa ama-50% kwiindleko zothutho
l Ukunciphisa iipesenti ezingama-90 kwiindleko zokurisayikilisha
Ibhokisi yebhokisi yomxhamli inezibonelelo zayo:
Ibhokisi lebhokisi le-100% linokuphinda lisetyenziswe.
Indawo enkulu, enokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo kunxibelelwano lwegraphic.
Ukuthungwa okuphelelweyo ngokupheleleyo kunye nokuthambisa, okunciphisa iindleko zokuhamba.
Ubungakanani obahlukeneyo kunye noyilo olwenziwe ngokupheleleyo ukwanelisa iimfuno zomthengi ngamnye okanye imveliso.
Ixesha Post: Sep-06-2020